သူမ မှားယွင်းကြောင်း ငိုယိုတောင်းပန်ပြီး ပြောလာတဲ့ ဘေဘီမောင် (ရုပ်သံ ၂ ခု) – Maythadin
သူမ မှားယွင်းကြောင်း ငိုယိုတောင်းပန်ပြီး ပြောလာတဲ့ ဘေဘီမောင် (ရုပ်သံ ၂ ခု)
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီနဲ့ ဘေဘီမောင်တို့ဟာ တစ်ချိန်က သိပ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါနော်။
အမြဲတတွဲတွဲသွားလာနေကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့် အချင်းချင်း အခုလိုနောက်ကျောကနေ ဓားနဲ့ထိုးမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်မိကြပါဘူးနော်။
ကြားသိရသလောက်ကတော့ ဘေဘီမောင်က မေပန်းချီ အရမ်းမုန်းတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို မေပန်းချီမိခင်ရှေ့သို့ ခေါ်သွားခဲ့ရာမှစတင်ခဲ့ကြတာပါနော်
ဘေဘီမောင်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် မေပန်းချီရဲ့မိခင် ရုတ်တရတ်နှလုံးဖောက်ကာ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရလို့လဲ ပြောပါတယ်။
အဲ့အကြောင်းတွေကို မေပန်းချီက သူမရဲ့အကောင့်မှာ ရေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘေဘီလေးကတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့အောက်မြင်နေသလို အဆိုတော်ချောလေးသားဂန်းနဲ့အတူ
ကြည်နူးပျော်စရာအချစ်ရေးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကာစီးပွားရေးဘက်မှာလည်း တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ယနေ့မှာတော့ ဘေဘီမောင်က မိတ်ဆွေကောင်းလို့ထင်ပြီးပတ်သက်ခဲ့ပေမယ့်ကြောက်စရာကောင်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကြုံခဲ့ရကြောင်းပြောပြခဲ့ဖူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်
သူမကတော့ “ဘဝမှာ မိတ်ဆွေကောင်းလို့ထင်ပတ်သတ်ခဲ့ပေမယ့် ကြောက်စရာကောင်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ ရွှံစရာမတစ်ယောက်နဲ့ကြုံဖူးခဲ့ပြီဘဝမှာမိန်းခလေးတိုင်းကိုချစ်တတ်ပေမယ် အဲ့ဒီမိန်းမကိုတော့ ရွှံမုန်းပါရှင့်” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာမျှဝေလာခဲ့ဖူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
ဘေဘီမောင်ကတော့ သူမရွံမုန်းမိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ဖူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒိနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ သိုင်းလောက အရှုပ်တော်ပုံဆိုတာလဲ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေများစွာ ခံနေရတဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ သိုင်းလောကအရှုပ်တော်ပုံဘေဘီမောင် ကတော့ မော်ဒယ်ဘဝကနေ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်သို့တဖြည်းဖြည်းရောက် ရှိ လာ သူလေးတစ်ယောက် ပါနော်။
ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ နာမည်ရ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် လူသိများလာပါပြီနော်။
အာဏာသိမ်းခံရစဉ်အစပိုင်းမှာတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီးအခုမှာတော့ တည် ငြိမ် နေ တဲ့ ရေ ပြင် ပမာ တိတ် ဆိတ် ငြိမ်သက် နေ ပါ တယ် နော်။
တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေကတော့ တော်လှန်ရေးကို ဟန်ဆောင်လုပ်ပြခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်နော်။
ဘုရားတရားတွေ နေ့စဉ်လုပ်နေပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေသူ ဘေဘီမောင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်နော်။
မော်ဒယ် ဘဝ တုန်းက ပွေခဲ့ ရှုပ် ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ လူမှု ကွန်ယက် မှာ ပြန့်နှံ့ နေပါ တယ်နော်။
များလိုက်တဲ့ လင် ဆို တာ ထက်ထက်မိုးဦးတောင်အရှုံးပေးရတယ်။ဒါပေမယ့် ဘေဘီ မောင် ကတော့ ခြူစားတာတောင် အ ဆင် တွေ ကိုပဲ ပတ် ခြူ တာ နော်နင် တော်ခတော် အ ကောင်းကြိုက် လို့ ပရိသတ်တစ်ဦးမှ ပြောကြားထားပါသေး တယ် နော်….
အခုဆို ဘေဘီမောင်ရဲ့ သိုင်းလောက အရှုပ်တော် ပုံကိုပရိတ်သတ်တွေလည်း သိသင့်သလောက် သိလောက်ပြီ လို့ ထင်ပါတယ်အခုလို ဝင် ရောက် ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ခုတခါမှာတော့ ဘေဘီမောင်က မေပန်းချီနဲ့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြဿနာတွေ ပိုမိုကြီးထွားလာပြီးနောက်သူမဘက်က မှားယွင်းမိကြောင်းကို သူမချစ်သူ သားဂန်းအကောင့်ကနေ ခုလိုပဲ ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမပန္းခ်ီနဲ႕ ေဘဘီေမာင္တို႔ဟာ တစ္ခ်ိန္က သိပ္ခ်စ္ခဲ့ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြပါေနာ္။
အၿမဲတတြဲတြဲသြားလာေနၾကသူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း အခုလိုေနာက္ေက်ာကေန ဓားနဲ႕ထိုးမယ္လို႔ဘယ္သူမွမထင္မိၾကပါဘူးေနာ္။
ၾကားသိရသေလာက္ကေတာ့ ေဘဘီေမာင္က ေမပန္းခ်ီ အရမ္းမုန္းတဲ့ ရည္းစားေဟာင္းကို ေမပန္းခ်ီမိခင္ေရွ႕သို႔ ေခၚသြားခဲ့ရာမွစတင္ခဲ့ၾကတာပါေနာ္
ေဘဘီေမာင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေမပန္းခ်ီရဲ႕မိခင္ ႐ုတ္တရတ္ႏွလုံးေဖာက္ကာ ေဆး႐ုံတက္ခဲ့ရလို႔လဲ ေျပာပါတယ္။
အဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေမပန္းခ်ီက သူမရဲ႕အေကာင့္မွာ ေရးျပခဲ့ဖူးပါတယ္။
ေဘဘီေလးကေတာ့ ပရိသတ္အခိုင္အမာနဲ႕ေအာက္ျမင္ေနသလို အဆိုေတာ္ေခ်ာေလးသားဂန္းနဲ႕အတူ
ၾကည္ႏူးေပ်ာ္စရာအခ်စ္ေရးေလးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနကာစီးပြားေရးဘက္မွာလည္း တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္..။
ယေန႕မွာေတာ့ ေဘဘီေမာင္က မိတ္ေဆြေကာင္းလို႔ထင္ၿပီးပတ္သက္ခဲ့ေပမယ့္ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး ေအာက္တန္းက်တဲ့သူတစ္ေယာက္နဲ႕ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ဖူးတာပဲျဖစ္ပါတယ္
သူမကေတာ့ “ဘဝမွာ မိတ္ေဆြေကာင္းလို႔ထင္ပတ္သတ္ခဲ့ေပမယ့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး ေအာက္တန္းက်တဲ့ ႐ႊံစရာမတစ္ေယာက္နဲ႕ႀကဳံဖူးခဲ့ၿပီဘဝမွာမိန္းခေလးတိုင္းကိုခ်စ္တတ္ေပမယ္ အဲ့ဒီမိန္းမကိုေတာ့ ႐ႊံမုန္းပါရွင့္” ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာမွ်ေဝလာခဲ့ဖူးတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္
ေဘဘီေမာင္ကေတာ့ သူမ႐ြံမုန္းမိတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပလာခဲ့ဖူးတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္
ဒိေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူမရဲ႕ သိုင္းေလာက အရႈပ္ေတာ္ပုံဆိုတာလဲ ပ်ံ့ႏွံ႕လာခဲ့ပါတယ္။
ေဝဖန္မႈေတြမ်ားစြာ ခံေနရတဲ့ ေဘဘီေမာင္ရဲ႕ သိုင္းေလာကအရႈပ္ေတာ္ပုံေဘဘီေမာင္ ကေတာ့ ေမာ္ဒယ္ဘဝကေန အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔တျဖည္းျဖည္းေရာက္ ရွိ လာ သူေလးတစ္ေယာက္ ပါေနာ္။
ဒီေန႕ဒီခ်ိန္မွာေတာ့ နာမည္ရ သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ လူသိမ်ားလာပါၿပီေနာ္။
အာဏာသိမ္းခံရစဥ္အစပိုင္းမွာေတာ့ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးအခုမွာေတာ့ တည္ ၿငိမ္ ေန တဲ့ ေရ ျပင္ ပမာ တိတ္ ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ ေန ပါ တယ္ ေနာ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးကို ဟန္ေဆာင္လုပ္ျပခဲ့တယ္လို႔ ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္ေနာ္။
ဘုရားတရားေတြ ေန႕စဥ္လုပ္ေနၿပီး ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြၿငိမ္းခ်မ္းပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးေနသူ ေဘဘီေမာင္ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ရႈပ္ေထြးေပြလီလွတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
ေမာ္ဒယ္ ဘဝ တုန္းက ေပြခဲ့ ရႈပ္ ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ လူမႈ ကြန္ယက္ မွာ ျပန႔္ႏွံ႕ ေနပါ တယ္ေနာ္။
မ်ားလိုက္တဲ့ လင္ ဆို တာ ထက္ထက္မိုးဦးေတာင္အရႈံးေပးရတယ္။ဒါေပမယ့္ ေဘဘီ ေမာင္ ကေတာ့ ျခဴစားတာေတာင္ အ ဆင္ ေတြ ကိုပဲ ပတ္ ျခဴ တာ ေနာ္နင္ ေတာ္ခေတာ္ အ ေကာင္းႀကိဳက္ လို႔ ပရိသတ္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားထားပါေသး တယ္ ေနာ္….
အခုဆို ေဘဘီေမာင္ရဲ႕ သိုင္းေလာက အရႈပ္ေတာ္ ပုံကိုပရိတ္သတ္ေတြလည္း သိသင့္သေလာက္ သိေလာက္ၿပီ လို႔ ထင္ပါတယ္အခုလို ဝင္ ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာေန႕ရက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ခုတခါမွာေတာ့ ေဘဘီေမာင္က ေမပန္းခ်ီနဲ႕ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ျပႆနာေတြ ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီးေနာက္သူမဘက္က မွားယြင္းမိေၾကာင္းကို သူမခ်စ္သူ သားဂန္းအေကာင့္ကေန ခုလိုပဲ ေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။
သမီးဖြစ်သူ မစ်မစ်တုန်လေးကို အရမ်းလွမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အာဇာနည်
မတူညီတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေကို ပုံဖော်ခဲ့တုန်းက အချိန်တွေကို လွမ်းဆွတ်သတိရမိတယ်ဆိုတဲ့ ခေးဆက်သွင်